Ukugeza kwe-Massage surf
Idizayini yokonga amandla
Kungani ukugeza, ukuntanta nokunye ukwelashwa kungakusiza uzizwe uqabulekile
Wonke umuntu unendlela ehlukile yokuqeda ukukhathala, abantu abaningi bazokhetha ukugeza okushisayo noma ukugeza okushisayo, ukukhathala kungancishiswa ngokushesha, bese kubonakala sengathi ungaqala usuku olusha. Ngakho-ke izinto eziningi ezishisa impepho ziyathengiswa, kepha akuyona nje iphunga ...
Uhlobo luni lwe-jacuzzi olugcwalisa yonke imicabango yakho ye-jacuzzi
Ukuphela kosuku olumatasa emsebenzini, imvelo yokuya ekhaya ukuyokhululeka, uthele ingilazi yewayini elibomvu, ubeke ucezu lomculo okhululekile, igwebu ku-jacuzzi eligcwele amacembe ama-rose, vumela ibhamuza eliqhumayo lihlanze ukukhathala kwesudi , lokhu mhlawumbe kuyisifiso sawo wonke umuntu! Amantombazane amaningi awakwazi ...
Ziyini izinzuzo zezempilo zokubhukuda emithonjeni eshisayo
Wonke umuntu uthanda ukuba nentwasahlobo eshisayo yokubhukuda ngaphandle, ngoba imidlalo yokubhukuda iziphethu ezishisayo azikwazi kuphela ukukhulula umzimba nengqondo, kepha futhi zilungele impilo. Ungathanda ukwazi izinzuzo zokubhukuda entwasahlobo eshisayo? Iphuli yokubhukuda yangaphandle Intwasahlobo elula, futhi yazi ...
Yini izici zechibi le-villa
Kulezi zinsuku, amachibi okubhukuda azimele asephenduke ingxenye evamile yezindlu, ikakhulukazi izindlu zamaholide. Indawo yokubhukuda yangasese ingasiza abantu ukuthi bavikele ubumfihlo babo futhi bajabulise ngokwengeziwe. Indawo yokubhukuda yangasese nayo ingasiza ekuthuthukiseni ukubukeka kwezindlu e-e enkulu ...
Idamu elingamamitha-skwele ayi-10 lingenawo umshini wokunyathela emanzini, ukuvumela ukuthi uzwe ukubhukuda olwandle
Lapho kufika ihlobo, kuyisikhathi sokuzijabulisa emanzini, kepha ngenxa yemikhawulo yendawo, imvamisa kufanele sigijime echibini lokubhukuda lomphakathi. Kepha amachibi omphakathi agcwele futhi ikhwalithi yamanzi ayiqinisekisiwe. Isikhathi esiningi, singabheka kuphela i-p ...
Amachibi e-Infinity Kungathi thina njengababhukudi sikhetha kuphi ukubhukuda lapho sibhekene nalolu bhubhane
Izindawo zokubhukuda ezweni lonke zavalwa ngenxa yalesi sifo. Yize eminye imisebenzi yokwenziwa kabusha kwe-natatorium, kepha embonini yokubhukuda, umthelela ubungeke ugwemeke. Yize ezinye ze-natatorium seziluleme zaya ezingeni lesizini, ikakhulukazi i-sw endala ...
I-Infinity Pool Thanda impilo, thanda ukubhukuda ulikhetha kanjani iqula lakho langasese
Impilo yothando, ukuthanda ukubhukuda, kaningi uzobe ubhukuda njengohlelo oludingekayo. Ehlobo, iya ebhishi, echibini lokubhukuda lomphakathi, noma echibini elifudumele lehhotela, iklabhu yokubhukuda? Yize kunezinqumo eziningi, kunezinkinga eziningi okufanele ubhekane nazo, njenge: i-safet ...